ADY AMIN’NY TSY FANJARIAN-TSAKAFO : Hatsangana amin’ny volana Mey ny ozinina mpamokatra sakafo ao Tolagnaro – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:07
Efa nisy ny fidinana ifotony natao tany Atsimo, ny herinandro teo
Accueil/Songadim-baovao/ADY AMIN’NY TSY FANJARIAN-TSAKAFO : Hatsangana amin’ny volana Mey ny ozinina mpamokatra sakafo ao Tolagnaro
Efa an-taonany maro no nisy ny hanoanana sy ny Kere any Atsimon’i Madagasikara. “Fotoana izao hametrahana vahaolana maharitra raha toa ka vahaolana vonjimaika hatrany no natao tany an-toerana hatramin’izay”, hoy Ramatoa Mialy Rajoelina, omaly. Hapetraka ao Tolagnaro manomboka ny volana Mey izao, noho izany, ny ozinina mpamokatra sakafo ho an’ny Faritra Androy sy Anosy, izay hitoetra ho vahaolana maharitra ho an’ny olan’ny tsy fanjarian-tsakafo any an-toerana.
Lucien R. 16 mars 2021
Zaza manodidina ny 50 tapitrisa maneran-tany no fantatra fa ianjadian’ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika. Anisany ahitana betsaka izany tranga izany, raha ho an’ny eto Madagasikara, ny ao amin’ny Faritra Androy sy Anosy. Hanamafy tokoa ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo any amin’ny tapany Atsimo io, noho izany, ny fiarahamiasan’ny Fikambanana Fitia, amin’ny Fondation Mérieux sy ny Vondrona Nutriset. Hisy ny fametrahana ozinina ao Tolagnaro izay hahafahana mamokatra sakafo any amin’iny Faritra iny. “Mahakasika ny foko tanteraka ity tetikasa ity satria hahafahan’ireo zaza malagasy any Atsimo hivoaka amin’ny tsy fanjarian-tsakafo. Tetikasa izay hanavotra aina maro”, hoy Ramatoa Mialy Rajoelina, nandritra ny lahateniny. Notontosaina, omaly tetsy Alarobia, noho izany, ny fifanaovan-tsoniam-piarahamiasa teo amin’ny telo tonta, izay tafiditra ao anatin’ny fikaroham-bahaolana maharitra, izay hitondra fanantenana ihany koa ho an’ireo fianakaviana rehetra any Atsimo.
Marihana fa ny Fondation Mérieux dia fantatra amin’ny fiasana eo amin’ny sehatry ny fahasalamana, amin’ny firenena maro maneran-tany. “Fondation” izay misehatra amin’ny fanatsarana hatrany ny fiainam-bahoaka, indrindra ireo tena sarihana, any amin’ireo firenena andalam-pandrosoana. Ny Vadin’ny Filoha izay nisaotra manokana ny Fondation Mérieux, indrindra tamin’ny fanohanan’izy ireo ny tetikasa fananganana ozinina any Atsimo, izay hamaha tanteraka ny olan’ny tsy fanjarian-tsakafo ny vokatra azo avy amin’izany.
850 000 Euro avy amin’ny Fondation Mérieux
Araka ny fanazavan-dRamatoa Mialy Rajoelina, Filohan’ny Fikambanana Fitia, hozaraina maimaimpoana any amin’ny sekoly, ho fanampin-tsakafo amin’ny andavanandro ny vokatra azo amin’izany. Notsindriany ihany koa fa ilaina amin’ny fitombon’ny ankizy ny sakafo. Etsy ankilany, ny fananganana ny ozinina ao Taolagnaro dia hiteraka famoronana asa ihany koa ho an’ireo vahoaka any ifotony. Omen-danja kokoa ny vehivavy amin’ny fandraisana amin’izany ozinina izany, na ireo hiasa eo anivon’ny ozinina mivantana, na ireo hiasa amin’ny fanangonana ireo akora fototra, amin’ny alalan’ny fiarahamiasa amin’ireo koperativa isan-tokony. “Mitovy ny tanjona sy ny fomba fijery eo amin’ny Fikambanana Fitia sy ny Fondation Mérieux ary ny Vondrona Nutriset, izay miompana amin’ny hanatsaharana tanteraka ny kere any Atsimon’ny Nosy”, hoy ny fanazavana.
Araka ny fanazavana, mahatratra 850 000 Euro ny tetibola avy amin’ny Fondation Mérieux entina hanatontosana ity tetikasa goavana ity. Ny herinandro lasa teo, efa nisy ny fidinana ifotony nataon’ny Fikambanana Fitia, niaraka tamin’ireo mpiara-miombona antoka ireo, tany Atsimo. Nandritra izany no nijerena ny ifotony ny hametrahana ny fotodrafitrasa. Marihana fa zaza manodidina ny 50 000 eo no hisitraka izany, ary hamokatra fonosana manodidina ny 8 tapitrisa isan-taona eo kosa ny ozinina. Amin’ny volana Mey izao no hanomboka ny fananganana ny orinasa, ary hamokatra avy hatrany aorian’ny fahavitany.
Fifanarahana teo amin’ny Fikambanana Fitia – PAM – Fondation Orange Solidarité Madagascar
Antony iray lehibe mahatonga ny mpianatra tsy marisika amin’ny fandehanana an-tsekoly ny tsy fanjarian-tsakafo any amin’iny tapany atsimon’ny Nosy iny. Misy fiantraikany betsaka amin’ny hoavin’ireo zaza malagasy izany, ka nahatonga Fikambanana Fitia nametraka ny fandaharanasa Havotse, ny Janoary lasa teo. Fandaharanasa izay miompana amin’ny fanomezana sakafo mafana sy ara-pahasalamana ho an’ny mpianatra, ka hampirisika azy ireo indray hiverina an-tsekoly.
Efa natomboky ny Fikambanana Fitia ny fanatanterahana ny asa, ny volana Febroary lasa teo, ka sakafo mafana 179 000 isa no nozaraina tamin’izany, ary sekoly 20 tany amin’ny Faritra Androy sy Anosy no nahazo ny anjarany. Resy lahatra tamin’ny finiavana nananan-dRamatoa Mialy Rajoelina, izay Filohan’ny Fikambanana Fitia, ireto mpiara-miombona antoka, indrindra ny fandaharanasa iraisampirenena momba ny sakafo (PAM), sy ny Fondation Orange Solidarité Madagascar ka nanolo-tanana. Ho an’ny PAM manokana, fanohanana ara-teknika ho fampandehanana ny tetikasa no ataony. Etsy ankilany kosa, fanohanana ara-bola no ataon’ny Fondation Orange Solidarité Madagascar, izay mitentina hatramin’ny 183 119 000 Ariary. Ity farany izay hahafahana mikarakara sakafo mafana 1 340 000 isa ho an’ny ankizy miisa 6 000, hahazoana vary 640 taonina, voamaina 270 taonina, lafarinina be otrikaina 20 taonina ho an’olona 2 300 isa any amin’ny Faritra Androy sy Anosy. Notontosaina omaly tetsy alarobia ny fifanaovan-tsoniam-piarahamiasa teo amin’ny telo tonta. Fotoana natrehin’ireo olo-manan-kaja maro.
PRAIMINISITRA NTSAY CHRISTIAN: « Hanova ny tantara sy ny endrika hoenti-mampandroso ny any Atsimo isika »
PRAIMINISITRA NTSAY : “Manaraka ny Lalàmpanorenana ny firosoana amin’ny fifidianana Loholona”
KAOMININA DIMY AO ANDROY: Filamatra amin’ny famongorana ny fanaovana maloto ankalamanjana